Google mandefa Nearby Share manerantany, ny fiasa toy ny AirDrop ho an'ny Android | Androidsis
Google mandefa ny Nearby Share manerantany, ny fiasa toy ny AirDrop ho an'ny Android
Ny Nearby Share dia apetrak'i Google manerantany, ny "Airdrop" -nanao ary izany dia mikendry ny hitondra anao amin'ny sehatra maro kokoa mba hanamorana ny fizarana rakitra eo amin'ireo mpampiasa samihafa.
Ary izany dia araka ny fantatsika, isaky ny mandeha telefaona bebe kokoa no mahazo an'io endri-javatra io izay efa anananao ao amin'ny bara fidirana Android haingana hampiatoanao azy. Ka tsy ho haingana sy azo antoka intsony ny mandefa rakitra amin'ireo mpampiasa akaiky azy.
Efa marika maromaro izay mahazo ny mpampiasa azy dia ity fizarana Nearby Share ity mba hizara rakitra haingana eo amin'ireo mpampiasa toa ny Apple Airdrop.
Ny fitaovana rehetra izay mandray ny Nearby Share dia manana ny kinova 20.30.19 an'ny Google Play Services ary anisan'izany ny telefaona finday avy marika toa ny ASUS, OnePlus, Xiaomi, Honor, Realme ary Nokia, ka raha manana ny iray amin'izy ireo ianao dia efa fantatrao izay azonao atao anio.
Para fidirana Near by Share:
Andao handeha any amin'ny Settings> Google> Device Connections> Nearby Share
Raha hitanao io dia afaka mandeha mankany amin'ny Quick Access ianao ao amin'ny bara fampandrenesana ary hampihetsika azy
Toy ny azonao ampidirina ny fidirana haingana amin'ny lisitr'izy ireo ao amin'ny tsipika fitadiavana
Google dia namorona ny Nearby Share miaraka amin'ny hevitra hoe fiasa tsy mitonona anarana tanteraka hizara rakitra. Izany hoe, azonao atao ny mandefa azy ireo amin'ny fomba tsy fantatra anarana, raha toa ianao ka afaka misafidy izay fifandraisana "hahita" anao: rehetra, sasany na tsia.
Fa ny ampahany tsara indrindra dia ny Google tianao ny hiasa eo akaikin'ny sehatra i Nearby Share amin'izay avy amin'ny Windows 10 dia afaka mandray rakitra isika.
Azonao atao ny mijery ny toerana misy anao ao amin'ny Google sy tadiavo io safidy io Nearby Share. Fitaovana Samsung Galaxy efa azon'izy ireo izany, noho izany avy amin'ny «Order button» ao amin'ny Quick Access dia afaka mahita ity safidy ity isika «Mizara amin'ny fizarana akaiky».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google mandefa ny Nearby Share manerantany, ny fiasa toy ny AirDrop ho an'ny Android
ho an'ny Huawei sasany dia misy ihany koa. Farafaharatsiny amin'ny P20 Pro ahy dia miseho ny safidy.
Samsung Galaxy M51: famaritana sy vidiny
Fikirana hanamafisana ny fampiasana ny WhatsApp